कान्तिपुर एक्सप्लेनर : के हो ललिता निवास प्रकरण ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
राजधानीको ‘प्राइम एरिया’ मानिने प्रधानमन्त्री निवास वरपरको सरकारी जग्गा पटकपटक अतिक्रमणमा परेर कंक्रिट जंगल बनेको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि नै भूमाफियाको आँखामा परेको यो जग्गा गणतन्त्रकालसम्म पनि जोगिएन । ‘ललिता निवास प्रकरण’ का नामले चिनिने यो अनियमितताको नालीबेली ।
माघ २३, २०७६ कृष्ण ज्ञवाली
काठमाडौँ — १९८६ सालदेखि ८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री ३ महाराज भीमशमशेरले किनेको र पछि उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको बालुवाटारको २९९ रोपनी जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबार आजभोलि ‘ललिता निवास’ भनेर चर्चित छ । मालपोतको अभिलेखअनुसार उक्त जग्गा भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका हुन् । ललिता निवास भीमशमशेरले छोरा हिरण्यशमशेरलाई अंश दिए । पछि हिरण्यशमशेरबाट उनका छोरा सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण भयो ।
सुवर्णशमशेरले २०१७ असार २९ गते श्रीमती श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, काञ्चन र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘हालैको बकसपत्र’ गरिदिए । बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे । यसबाहेक केही जग्गा बाटामा गयो ।
सुवर्णशमशेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेतासमेत हुन् । उनी राणाशासन ढलेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री र २०१६ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए ।
राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रजातान्त्रिक सरकार भंग गरी शासनसत्ता आफ्ना हातमा लिए । आफ्नो कदममा साथ दिन महेन्द्रले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सुवर्णशमशेर अघिल्लै दिन कोलकाता गएका थिए ।
राजा महेन्द्रले भेटेजतिका कांग्रेस नेतालाई नजरबन्द गरे । नेपाल छाडेर गएका नेताको सम्पत्ति जफत गरेर बदला लिने रणनीति लिए । त्यसै योजनाअनुसार २०१७ सालमै ‘विशेष परिस्थिति ऐन’ ल्याए । उक्त ऐनमा राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सरकारले त्यही ऐनअन्तर्गत ललिता निवासको सबै जग्गा ‘रोक्का’ गर्‍यो ।
पछि २०१८ सालमा सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ जारी गर्‍यो । त्यो ऐनअनुसार आवश्यक परे व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सक्ने भयो । त्यतिबेला ललिता निवाससहित काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा ठूला दरबार अधिग्रहण गरेर विभिन्न सरकारी निकाय स्थापना गरिए । सरकारले अधिग्रहण गरेपछि ललिता निवासको भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंक बस्यो, जग्गामा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास बने । २०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्र बैंकको भवन भत्काइयो ।
अधिग्रहण भएको कि जफत ?
ललिता निवास जफत भएको दाबी गर्दै राणा परिवारले अधिग्रहण गरिएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएको छ । सरकारी कागज र प्रमाणले ती जग्गा अधिग्रहण भएको पुष्टि गर्छन् । ललिता निवासको जग्गाका विषयमा छानबिन गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले अर्को प्रमाण पनि पायो । सो दरबार र जग्गाको मुआब्जा दिइसकेकाले ती सम्पत्ति सरकारका नाममा दर्ता गरिदिनु भनेर अञ्चलाधीश कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्र समितिले भेटेको थियो ।
सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरले आफूलाई गोठ र तबेला चाहियो भनी राजालाई बिन्ती गरेपछि केही जग्गा फिर्ता पाएका थिए । त्यतिबेला उनीबाट अधिग्रहणका क्रममा सरकारले दिएको मुआब्जा बराबरको रकम लिएर जग्गा फिर्ता गरिएको थियो । समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘जफत भएको भए जग्गा पछि फिर्ता लिँदा पहिलेको मोल तिर्नुपर्ने थिएन ।’
स्वामित्व हस्तान्तरण र अनियमितता
त्रिताल प्रतिवेदनका अनुसार ललिता निवासको जग्गा २९९ रोपनी ९ आना भए पनि प्रधानमन्त्री निवास अघिल्तिरबाट बाटो, पर्खाल आदि बनाएपछि २७२ रोपनी १५ आना जग्गा बचेको थियो । त्यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा ६० रोपनी गएपछि बाँकी रहेको २१२ रोपनी १५ आना जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता भयो । समरजंग कम्पनी काठमाडौं उपत्यकाको रुख तथा काठदाउरा काट्न स्थापित गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय थियो जुन गत वर्ष भंग गरियो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखसमेतको निवास यहीमध्येको ६० रोपनी १ आनामा बनाइयो ।
यो जग्गामध्ये केही २०३६ सालमा जेठ र कात्तिक गरी दुई पटक राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट बाँडियो । सुवर्णशमशेरका जेठा छोरा कनक, पविता देवी, दामोदर उपाध्याय र लोकगायक कुमार बस्नेतलाई गरी १२ रोपनी ७ आना जग्गा दिइयो । ‘हुकुमको ओखती’ नभएको पञ्चायतकालमा राजाको हुकुमविरुद्ध कसैले प्रश्न उठाउने कुरै थिएन र उठाएनन् पनि ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । उक्त सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायतकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएको भए छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार गठन भएपछि गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समिति गठन भयो तर त्यसले कुनै निर्णय गरेन । पछि थप छानबिन र निर्णय नभई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते ११२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा दर्ता गरिदियो । निर्णय गर्दाका दुइटा फाइल गायब छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार गरी गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मालपोत कार्यालयको निर्णय भएका ती फाइल कर्मचारी गोपाल कार्कीले २०६४ सालमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुर्‍याउन भनी लगेका थिए । पछि उनले फाइल फिर्ता ल्याएनन् । छानबिन समितिका संयोजक त्रिताल भन्छन्, ‘निर्णय हुनुको आधार र कारण उल्लेख गरिएका दुई महत्त्वपूर्ण फाइल गायब पारिएपछि हामीले त्यसबारे थप कुरा भेट्टाएनौं ।’
यसरी दर्ता भएको मध्ये करिब २२ रोपनी जग्गा केही सातादेखि महिनाबीचमा राणा परिवारले विभिन्न कर्मचारी र तिनका नातेदारलाई घूसस्वरूप बकस दिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकीमध्ये आधा जग्गा नक्कली मोहीहरूले हात पारेर तत्कालै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी अनि उनका परिवारलाई ‘कौडीको भाउमा’ बेचेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
यस जग्गामा जबरजस्ती मोही आइलागे । सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार ती मोही छुटाउन भनेर रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले ६ रोपनी जग्गा ‘खाइदिए’ । शोभाकान्त र रामकुमारहरूले जग्गामा मोहीको विवाद टुंगो लाग्नुअघि नै राणा परिवारसँग रोपनीको १६ लाख रुपैयाँका दरले बैना गरिसकेका थिए ।
समरजंग कम्पनीको जग्गामा खेती गरेर कुत बुझाउने किसानहरूलाई केही मानिसले उचाले । उनीहरूले लेखनदास रामकुमार सुवेदीको सहयोगमा मोहीको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए । शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ती किसानलाई उनीहरूले पाउने आधा जग्गा आफूहरूलाई दिनुपर्ने सर्तमा मोही दर्ता गराउन सहयोग गरे । भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख उमानाथप्रसाद ज्ञवालीले जग्गामा मोही कायम हुने फैसला गरिदिए ।
यो निर्णयविरुद्ध राणा परिवार पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । अदालतले पनि मोहीकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । जग्गाधनीले आधा जग्गा पाए । यसरी दर्ता भएका ३७ जना मोहीबाट ढकाल र सुवेदीले करिब ३० रोपनी जग्गा लिए ।
छानबिनमा संलग्न एक अनुसन्धान अधिकारीले भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीले ठूलो बदमासी गरेको बताए । ती अधिकारीले भने, ‘३० वर्षदेखि सरकारका नाममा कायम भएको जग्गामा मोही रहेको ठहर गरी किर्ते गरियो ।’ त्रितालको भनाइमा, अधिग्रहण गरिएकाले ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम हुन सक्दैन । २०२१ मंसिर ६ गते भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भयो । ऐनअनुसार जग्गा कमाउने मोही दर्ता हुन पाउँथे । ऐन लागू भएको १० दिनभित्रै ललिता निवासलगायत ६ वटै दरबारका जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना निस्कियो । यसबीचमा मोही बन्न सम्भव थिएन ।
कनकशमशेरका नाममा पहिल्यै दर्ता भएको जग्गा नाप्दा १२ आना बढी पाइयो । २०६२ जेठ ३ गते छुट दर्ता समितिको सिफारिसका आधारमा यो जग्गा कनककी श्रीमती सुनितीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भयो । पञ्चायतकालमा यो जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो ।
२०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर रहेको ललिता निवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासअन्तर्गत ल्यायो । त्यहाँ ‘मोही रहेको’ नक्कली विवरण खडा गरियो अनि उनीहरूलाई पुनःस्थापनाका नाममा करिब १३ रोपनी जग्गा बाँडियो । बाटो बनाउँदा थप ५ रोपनी जग्गा घट्यो । यस पटक जग्गा पाउने १२ जना नक्कली मोहीले पनि आफूले जग्गा पाएको केही दिनमै उनै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनका परिवारलाई बेचे । त्रिताल प्रतिवेदनले त्यही आधारमा दुवै जनालाई ‘भूमाफिया’ भनेको छ ।
मोहीसम्बन्धी निर्णय भूमिसुधार कार्यालयबाट हुनुपर्नेमा त्यतिबेला मालपोत कार्यालयबाट गराइएको थियो । प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको आवतजावतलाई सहज हुने भनेर सरकारी जग्गाबाट बाटो बनाई भूमाफियाले गरेको प्लटिङमा जाने बाटो सहज पारियो । सडकका लागि साढे २ रोपनी छुट्याइएकामा करिब ५ रोपनी जग्गा उपयोग गरियो ।
गुठीका नाममा दर्ता
२०६९ माघ ५ गते मालपोत कार्यालयले ललिता निवासको तीन रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । यस्तो निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सरकारी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गरेपछि त्यसमा मोही कायम गर्न सजिलो हुने र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सकिने भएकाले भूमाफियाले ‘गुठी दर्ताको प्रपञ्च रचेको’ त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्रितालका अनुसार त्यो गुठीको जग्गा भए २०१७ सालमा सुवर्णशमशेरले गरिदिएको बकसपत्रमा ‘फलानो गुठीका नाममा रहेको’ भन्ने उल्लेख हुन्थ्यो । उनले भने, ‘त्यतिबेलाका मालका कर्मचारी छलछाम गर्दैनथे । त्यसैले हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौं भने त्यो जग्गामा गुठी थिएन, जोताहा मोही पनि थिएनन् । यी पछि खडा गरिएका हुन् ।’
ललिता निवास अहिले करिब ५ सय टुक्रामा बाँडिएको छ र यहाँ एक सयभन्दा बढी जग्गाधनी छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पनि यहाँको ३ रोपनी १२ आना जग्गा किनेर आफ्नो कार्यालय बनाएको छ । ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ अर्ब ६४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण दिएका छन् ।
कुन निकायले के गरे ?
ललिता निवासको जग्गा अनियमितता राज्यका अरू निकायको पनि आँखामा परेको हो तर भूमाफियाहरू कतिसम्म बलिया थिए भने उनीहरूले सबैतिर प्रभाव पारेर आफू अनुकूलको निर्णय गराए । अनियमितता पुष्टि गर्ने प्रमाण सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको थियो । लेनदेनसम्बन्धी एक मुद्दाको प्रमाणका रूपमा सर्वोच्चमा पेस भएको अडियो रेकर्डमा शोभाकान्त ढकालले भनेका छन्, ‘सबैतिर मिलाउँदा मेरो धेरै रकम खर्च भएको छ । त्यो कहाँ कहाँ गयो भनेर सबै हिसाब अहिले दिन सक्दिनँ ।’
ललिता निवासको मामिला चार पटक अदालत पुगेको देखिन्छ । आफूले पाएको जग्गामा भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गरिदिएको भन्दै राणा परिवार २०५६ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएको थियो । पुनरावेदनले समेत मोहीकै पक्षमा फैसला सुनाइदियो । अख्तियारले २०६४ जेठ २० गते ३५ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा २०६४ फागुन ३० गते सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्देशन बदर गरिदियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघले गैरकानुनी रूपमा भवन बनाएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो तर सर्वोच्चले जग्गा सरकारी ठहरिए सोहीबमोजिम हुने भन्दै भवन निर्माण रोक्नु नपर्ने आदेश गरिदियो । व्यक्तिलाई जग्गा दिने निर्णय गलत थियो भन्दै त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले आवश्यक प्रमाण र कागजात नझिकाई जग्गा व्यक्तिको नै भएको फैसला गरेको थियो । सो फैसला गर्ने न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन थालेको थियो तर छानबिन नटुंगिँदै उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो ।
करिब डेढ दशकको अवधिमा अख्तियारका तीन जना प्रमुख आयुक्त र एक जना आयुक्तले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको उजुरीलाई अनुसन्धान नगरी असफल बनाएका थिए । अख्तियारले २०६० असार १८ गते ललिता निवाससम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । उजुरी तामेलीमा राख्नु भनेको थप प्रमाण नभेटिएसम्म त्यो छानबिनले अनियमितता पुष्टि गर्न सकेन भनी निष्कर्ष निकाल्नु हो ।
त्यसको ९ महिनापछि २०६० चैत ३ गते अख्तियारले ‘गुठीमा जग्गा कायम हुने’ निर्णय गर्दै गुठी संस्थानलाई जग्गा संरक्षणका लागि पत्र लेख्यो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले गुठीको जग्गा कायम गराउने निर्णय गरेका थिए । पछि यो मिसिल अख्तियार र मालपोत कार्यालयबाट गायब बनाइयो ।
लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुख भएपछि विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा अख्तियारमा भित्र्याए । तीमध्ये एक थिए, भूमिविज्ञ भनिएका हुपेन्द्रबहादुर केसी । उपसचिवका रूपमा मालपोतमा रहँदादेखि नै उनी विवादास्पद थिए । उनले ५ करोड रुपैयाँ खाएर ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरिदिएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरी हेर्ने जिम्मा उनैलाई दिइयो । अख्तियार स्रोतको भनाइमा त्यसपछि उजुरी दिनेलाई नै धम्क्याउन थालियो ।
लोकमानसिंह कार्की ‘अयोग्य’ भएर अख्तियारबाट बाहिरिएपछि दीप बस्न्यात अख्तियार प्रमुख भए । उनका पालामा पनि २०६६ र ६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आडमा जग्गा अतिक्रमण भएको भनी उजुरी परेको थियो । जग्गा अनियमिततामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवका हैसियतले बस्न्यात स्वयं संलग्न थिए । त्यसैले यसबारे उनले छानबिन गरेनन् । बस्न्यातको अवकाशपछि अख्तियारले फेरि नयाँ ढंगले अनुसन्धान थालेको हो ।
सरकारले पनि ललिता निवासको अनियमितता छानबिन गर्‍यो । गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो । समितिले अनियमितता भएको भनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गर्‍यो ।
त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ब्यूरोले भ्रष्टाचार, किर्ते र ठगीमा कारवाही चलाउन सिफारिस गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ब्यूरोले रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेलाई विचौलिया ठहर गरेको छ ।
राणा परिवारका नाममा जग्गा दर्ता भए लगत्तै २२ रोपनी जग्गा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहकी पत्नी उर्मिला शाह तथा पूर्व सहसचिव गेहनाथ भण्डारीकी पत्नी भुवनकुमारी चापागार्इं लगायतका नाममा विना कारण बकस पास भएकाले उनीहरु पनि यस काण्डमा सहभागी भएको देखिन्छ । राणा परिवारका सदस्यहरु, अनि जग्गा किन्ने मिनबहादुर गुरुङको पनि भूमिका देखिएको छ । गुरुङमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानविन गरिरहेको छ ।
ललिता निवासको जग्गाको विक्रीवितरण सरकारले गत वर्षदेखि रोक्का गरेको छ । गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको उक्त जग्गा सरकारले फेरी आफ्नो नाममा ल्याउने निर्देशन दिन सक्छ । तोकिएका अधिकृतले सो जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्न सक्छन् । अख्तियारले जग्गा जफत प्रयोजनका लागि ६५ जना जग्गाधनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । जग्गाधनीहरुलाई त्यस निर्णय विरुद्ध अदालतमा जाने बाटो भने बाँकी रहनेछ । अर्कोतर्फ अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतले प्रमाणका आधारमा छिनोफानो गर्नेछ । प्रहरीकै केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले ठगी र किर्ते भेटेमा जिल्ला अदालत काठमाण्डौंमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ ।
प्रकाशित : माघ २३, २०७६ ०७:१८
ओजस्वी आवाजको विश्राम
काठमाडौँ — सिनेकर्मी नीर शाहलाई बुधबार बिहानै करेन्ट लागेजस्तो अनुभव भयो । आफ्ना समकक्षी पत्रकार दुर्गानाथ शर्माको निधन भएको खबर जसै उनका कानमा पर्‍यो, नेपाल टेलिभिजन सुरु गर्दा साथै बिताएका दिन स्मरण भए ।
‘आज म भयंकर शोकमा छु,’ साँझपख उनले भने, ‘देशले एउटा होनहार पत्रकार गुमाएको छ, मैले सबभन्दा आत्मीय मित्र गुमाएको छु ।’ अढाई दशकअघि नै ओपन हार्ट सर्जरी गराएका शर्मा केही दिनयता मुटुकै समस्याले पीडित थिए । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मंगलबार राति लगिएका उनको ओजस्वी आवाजले बुधबार बिहान सदाका लागि विश्राम लिएको हो ।
यो खबर सुनेपछि नेपाल टेलिभिजनका समाचार निर्देशक राजु सिलवाललाई पनि नरमाइलो लाग्यो । ‘टेलिभिजनको स्मारिकाका लागि अस्ति भर्खरै एउटा लेख चाहियो भनेर मैले फोन गरेको थिएँ,’ ०४२ सालदेखि काम गरेर ०६२ मा अवकाश लिँदासम्म शर्माको नेतृत्वमा रिपोर्टिङ गरेका सिलवाल भन्छन्, ‘उहाँले नाइनास्ती नगरी लेखिपठाउनु पनि भयो । उहाँको कलम अन्तिमपटक टेलिभिजनकै लागि चल्न लेखेको रहेछ ।’ सिलवालसँग शर्मासँग बिताएका अनगिन्ती सम्झना छन् । ‘उहाँ सदैव प्रसन्न रहने, सानालाई सिकाउने र ठूलो पदमा पुगे पनि सरलताका साथ बोल्ने मानिस हुनुहुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल टेलिभिजनलाई स्थापित बनाउन उहाँको ठूलो भूमिका छ ।’ शर्माले पत्रकारिताका सबै विधा चहारे र उत्तिकै जमे पनि । इलामको बरबोटेमा ००४ सालमा जन्मेका शर्मा वरिष्ठ साहित्यकार तारानाथ शर्माका भाइ हुन् ।
दाजुको भाषाको विद्वत्ताबाट प्रभावित भएका दुर्गानाथले गोरखापत्रबाट पत्रकारिता सुरु गरेका थिए । दाजुझैं उनको कलममा पनि झर्रोवादी आन्दोलनको पुट पाइन्थ्यो, जसको झल्को गोरखापत्रमा उनका बाइलाइन छापिने समाचार र आलेखहरूमा हुन्थ्यो ।
‘उहाँ ज्यादै उच्च शिल्पका साथ सिनेमाको समीक्षा पनि गर्नॅहुन्थ्यो र मलाई त्यो साह्रै मन पर्थ्यो,’ आफूभन्दा उमेरले तीन वर्षले जेठा दुर्गानाथसँगका प्रारम्भिक दिन सम्झँदै नीर शाह भन्छन्, ‘०३५ सालमा हो क्यार, एक पटक उहाँले भर्खरै बनेको सिनेमा परालको आगोमाथि समीक्षा लेख्नुभयो, जुन पढेपछि मैले उहाँलाई पहिलो पटक भेटेको थिएँ ।’
त्यतिबेलासम्म शर्माले रेडियो नेपालमा समाचारवाचकका रूपमा पनि ख्याति कमाइसकेका थिए । नेपाल चलचित्र संस्थानले बनाउने वृत्तचित्रहरूमा सूत्रबोली प्रायः शर्माकै हुन्थ्यो । त्यसै समय राजा वीरेन्द्रले नेपालमा टेलिभिजनको सुरुवात गर्ने निर्णय गरे । ०४१ माघ १७ मा स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन परियोजनाका प्रमुख नीर शाह थिए ।
‘त्यतिबेला मलाई एक पत्रकारको खाँचो पर्‍यो र झ्वाट्ट दुर्गानाथजीको सम्झना हुन गयो,’ शाह सम्झन्छन्, ‘मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ र उहाँ काजमा टेलिभिजन भित्रिनुभयो ।’
देशको पहिलो टेलिभिजनको समाचार शाखाको प्रमुख भएका दुर्गानाथ शर्मा मातहतमा वन्दना राणा, राजु सिलवाल, राजेन्द्रदेव आचार्य र रमा सिंहलगायतका केही रिपोर्टर थिए । ‘हामी सबलाई रिपोर्टिङ गर्ने काम उहाँले नै सिकाउनुभएको हो,’ वन्दना भन्छिन्, ‘मैले करिअरको सुरु नै एक प्रतिभाशाली मान्छेसँग गर्न पाएछु भन्ने कुरो काम थालेको केही पछि नै मलाई लाग्न थालेको थियो ।’
टेलिभिजनको परीक्षण प्रसारण भएका बेला राजा वीरेन्द्रको अस्ट्रेलिया भ्रमण हुँदा त्यसको रिपोर्टिङ गर्न शर्मा साथै गएका थिए । त्यसपछि राजाका प्रत्येक विदेश भ्रमणमा शर्माकै माग हुन थाल्यो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि भएका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो विदेश भ्रमणमा नेपाल टेलिभिजनबाट दुर्गानाथलाई नै रोजी रोजी लगेको सम्झन्छन् सिलवाल । ‘बिनाकुनै टिपोटको सहारा धाराप्रवाह बोल्न सक्ने उहाँमा अद्भुत क्षमता थियो र जस्तै हालतमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो,’ सिलवाल भन्छन्, ‘विश्व घटना भन्ने कार्यक्रम साप्ताहिक रूपमा चलाउन थालेपछि त उहाँको प्रसिद्धि निकै बढ्यो ।’
सञ्चार जगतमा एकछत्र राज गरेको नेपाल टेलिभिजनको त्यस युगमा शर्मा कतिसम्म लोकप्रिय थिए भने उनलाई भेट्न र कुराकानी गर्न चाहनेको लामो सूची हुन्थ्यो तर उनी सरलतापूर्वक सबलाई भेट्ने र आत्मीयता प्रदर्शन गर्ने मामिलामा कहिल्यै झिँझो मान्दैनथे । एक पटक राजाले बंगलुरुबाट फर्कंदा प्लेनमा स्याम्पेन खुवाएछन् । खासै नपिउने स्वभावका शर्मा विमानस्थलमा आइपुग्दा केही बेसुरा थिए ।
‘तिनताक बेलुका ८ बजेको समाचार पढ्ने उहाँ र रमा सिंह मात्रै हुनुहुन्थ्यो । सिंह त्यस दिन बिरामी परेर आउन नसक्ने हुँदा अफिसले उहाँलाई बोलाउनुको विकल्प थिएन,’ सिलवाल भन्छन्, ‘त्यस हालतमा पनि उहाँ विमानस्थलबाट सिधै स्टुडियो छिर्नुभयो र समाचार पढेर मात्र घर फिर्नॅभयो ।’
त्यस दिन समाचार पढ्न थालेपछि उनको लरबरिएको चाल स्वतः ठीक भएको देखेपछि मात्रै पत्रकारिताप्रति शर्माको कति धेरै लगाव रहेछ भन्ने बुझ्न सकेको सिलवाल बताउँछन् ।
‘समाजमा पुरुषवादी सोच ज्यादा भएको त्यस समयमा पनि उहाँ महिलाहरूलाई विशेष हौसला दिनुहुन्थ्यो र अघि बढ्न उक्साउनुहुन्थ्यो,’ बन्दना राणा भन्छिन्, ‘सन् १९८७ मा काठमाडौंमा सार्कको उद्घाटन हुँदा नेपाल टेलिभिजनले सात देशमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्‍यो, जसमा नेपालीमा उहाँले र उहाँकै आग्रहमा अंग्रेजीमा मैले कमेन्ट्री गरेक थियौं ।’
प्रत्यक्ष प्रसारणको कुनै अनुभव नभएको त्यस समय आफू उमेरमा सानी र अनुभवले कनिष्ठ हुँदाहुँदै पनि शर्माले आडभरोसा दिएको हुनाले काम गर्ने ठूलो आँट पलाएको उनको अनुभव छ । ‘नेपाल टेलिभिजनलाई लोकप्रिय र हेर्न लायक बनाउन उहाँको धेरै ठूलो हात छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्ता प्रतिभाशाली मान्छेको निधन भयो भनेको सुन्दा म मर्माहत भएकी छु ।’
समाचार शाखाको प्रमुखका रूपमा नेपाल टेलिभिजन प्रवेश गरेका शर्मा पछि विकास गरिएको समाचार महाशाखाको निर्देशक हुँदै ०५७ देखि ५९ मा महाप्रबन्धक पनि भए । त्यसपछि अवकाश पाएका उनी राजाको प्रत्यक्ष शासनका क्रममा ०६० देखि ६२ सम्म पुनः महाप्रबन्धक भएर टेलिभिजन आए ।
टेलिभिजनमा २० वर्ष र पत्रकारितामा ४० वर्षभन्दा बढी बिताएका शर्माले ०७३ मा आफ्ना स्मृतिहरू सँगालेर आत्मकथा ‘छाल’ प्रकाशित गरेका थिए । अवकाशपछिको जीवनमा पनि उनी निजी टेलिभिजनहरूमा कार्यक्रम प्रस्तोताका रूपमा सक्रिय नै रहे । एक श्रीमती र दुई छोराका पिता शर्मा काठमाडौंको एक निजी कलेजमा पछिल्ला वर्षमा पत्रकारिता पढाउने काम पनि गर्दै आएका थिए ।
प्रकाशित : माघ २३, २०७६ ०७:१३